Inspiration Archives - Balsirjana
२० फागुन २०७७, बिहीवार
बालसिर्जना संवाददाता १ असोज २०७६, बुधवार
एउटा गाउँमा एउटा केटो बस्थ्यो । ऊ ज्यादै सङ्घर्ष गथ्र्यो तर उसका हात गोडा केही पनि चैल्दैनथ्यो । जति दुःख पोखे पनि उसलाई सुनिदिने कोही थिएन । उसको आसु थापिदिने कोही थिएन । अरु त बस उसलाई निर्दयी श्रापित मानिस भनी जिस्काउँथे बिचराले गरोस् पनि के ? उसका...बाँकी
कवि मोहन कोइराला
बालसिर्जना संवाददाता ३१ भदौ २०७६, मंगलवार
कवि मोहन कोइरालाको जन्म वि.सं. १९८३ मङ्सिर ११ गते काठमाडौं जिल्लाको डिल्लीबजारमा भएको थियो । उनले अनौपचारिक शिक्षा मात्र प्राप्त गरेका थिए । उनले पद्मपोखरी प्राथमिक विद्यालय हेटौडामा शिक्षक (२०१८), नेपाली साहित्य संस्थानका कार्यालय संचालक (२०२०), यातायात संस्थानमा नायक सुब्बा (२०२०), कुखुरा पालन (२०२९), ने.रा.प्र.प्र. का सदस्य (२०३०),...बाँकी
नेपाली कथाका ठूला मान्छे : परशु प्रधान
परशु प्रधानको जन्म वि.सं २००० साल माघ ३० गते भोजपुर जिल्लामा भएको हो । उनका बुबाको नाम रामबहादुर प्रधान र आमाको नाम इन्दिरा प्रधान हो । साहित्यकारका साथसाथै उनी राष्ट्रिय समाचार समितिको जागिरे पनि हुन् । पछि उनी साझा प्रकाशनको जागिरे पनि भए । २०२६ सालदेखि उनी प्रशासन...बाँकी
धेरै वर्षअगाडिको कुरा हो गोधुली साँझको समय थियो नदीकिनारमा मन्दमन्द हावा चलिरहेको थियो । एउटा बालक नदीकिनारमा बसेर आकाशतिर हेर्दै रमाइरहेका थिए । उनका पछाडिबाट महिला आवाज सुनियो, ‘भाइ, साँझ परिसक्यो घर हिँड । अब अबेर गर्नुहुन्न । छिटै रात पर्छ ।’ चिरपरिचित आवाज सुनेपछि उनले पछाडि फर्केर...बाँकी